» निर्मलालाई न्याय माग्दा यो ज्यादती
२०७५ मंसिर २०,बिहीबार ०६:५४
काठमाडौं २० मसिंर । बुधबार दिउँसो महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल न्युरोलोजिकल वार्डको ३१५ नम्बर क्याबिनमा पुग्दा कञ्चनपुरका २० वर्षीय अर्जुन भण्डारा ह्विलचेयरमा थिए । क्याबिन आगन्तुकले भरिएको थियो । ५३ वर्षीया आमा शिवकला छोरालाई चम्चाले खाना खुवाउँदै आगन्तुकलाई उनको स्वास्थ्यबारे जानकारी गराउँदै थिइन् ।
७ भदौमा कञ्चनपुर आन्दोलित थियो । आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप भइरहँदा अर्जुन घरमा खाना खाने तयारीमा थिए । त्यही वेला आएका एक साथीले उनलाई ‘आन्दोलनमा जाऊँ’ भने । खाना छाडेर आन्दोलनमा गए । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर अर्जुन घटनास्थलमै ढले । रक्ताम्य उनलाई महेन्द्रनगरस्थित अञ्चल अस्पताल लगियो । त्यहाँ उपचार नभएपछि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पताल पु(याइयो । त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमा काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पताल ल्याइएको हो । अस्पतालमा अझै कति बस्नुपर्ने हो ? डिस्चार्ज भएपछि उनको जीवन कसरी चल्ने हो ? सोचेर आमा हतासिन्छिन् ।
ल भीमदत्तनगर–१८ जानकीटोलका १४ वर्षीय चेतन भट्टको बायाँ हातमा गोली लागेको थियो । अहिले पनि उनको हातमा गोलीका छर्रा छन् । स्थानीय भृकुटी माविमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत चेतनले स्कुल जान नसके पनि अर्धवार्षिक परीक्षा भने दिएका छन् । ‘अहिले पनि हात दुखिरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले विद्यालय जान सक्दिनँ ।’
चेतनकी आमाले गोली चलेको पहिलो दिन छोरालाई आन्दोलनबाट घर ल्याएकी थिइन् । तर, उनी दोस्रो दिन सुटुक्क आन्दोलनमा गए । ‘दोस्रो दिन सुटुक्क आन्दोलनमा गएको रहेछ, गोली लागेर म¥यो भनेर खबर सुनेँ, तर भाग्यले बाँच्यो,’ आमा पुनमले भनिन् । हातमा रहेका गोलीका छर्रा निकाल्न चेतन मंगलबार काठमाडौं पुगेका छन् । उपचारका लागि सरकारले एक लाख २० हजार रुपैयाँ दिएको पुनमले बताइन् ।
ल भीमदत्तनगर–२ भाँसीका १६ वर्षीय उमेश देउवा चार महिना बित्दा पनि स्कुल जान सकेका छैनन् । उनको बायाँ खुट्टामा गोली लागेको थियो । अप्रेसन गरेर उनको खुट्टामा रड राखिएको छ । तीन महिना अस्पताल बसेर घर आएका उमेशले अर्धवार्षिक परीक्षा दिन सकेनन् । उमेशका बुबा यज्ञराजले छोराको पढाइ मात्र नभई जिन्दगी नै बर्बाद भएको पीडा सुनाए । ‘खुट्टा अझै निको भएको छैन, बायाँ भागको पूरै शरीर दुख्छ,’ उनले भने । उपचारका लागि सरकारले दिएको दुई लाख ५० हजार सकिएको उनले बताए । ‘आउँदो पुस १ मा फेरि अस्पतालले बोलाएको छ, उपचारका लागि खर्च छैन । सरकारले पूरै उपचार खर्च दिनुपर्ने हो किन दिएको छैन थाहा छैन,’ यज्ञराजले भने ।